Wasiir Saciid Ciid oo noqday wasiirka ugu Musuqmaasuq badan xukuumadda Xasan Khayrre – Kismaayo24 News Agency
Wasiir Saciid Ciid oo noqday wasiirka ugu Musuqmaasuq badan xukuumadda Xasan Khayrre
Arimaha Bulshada Breaking News English News Maqaalo Maqaalo iyo Warar Somali News Top News Xulashada K24 XULASHADA TODOBAADKA
by admin 27th February 2018 28th February 2018 0455
Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraaabka Mudane Siciid Xuseen Ciid oo noqday wasiirkii ugu musuqmaasuqa badan, uguna aqoonta liita Wasiiradda Dowladda Federaalka ee Somaaliya. Waxeey Shaqaalaha Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka, iyo dad badan oo aad u daneeyaaa wax soo saarka dalaga iyo sugnaanta cuntadda ee dalka Somaaliya is weeydiiyaan goorma Saciid Xuseen Ciid lala xisaabtami oo xilkan muhiimka laga wareejin.
Wasiirka Beeraha ayaa noqdey, shaqsi aad loogu qoslo, maxaa yeelay maamul iyo xirfad xumo awgeed. Isagoo dadka reer Puntland iyo Beesha carabta Maxamuud Saalax uu ka dhashey dullinimo ku yaqaanaan ayeey maanta Somaalidii kale barteeen. Mudanaha Wasiirka waxuu aduunka ugu neceb yahay ardayda ama dadka kale ee uu hore u yaqaaney waaga uu Hindiya joogey oo ay aadka uga jajab sanayd.
Waxaa la wariyey in shirarkii uu ku tagey wadamada sida Turkiga, Talyaaniga iyo Jarmalka uu dad is xambaar ku geeyey. Shararkii uu u tagey Talyaaniga iyo Jarmalka waxeey la yaabeen in Wasiirka uu ahayn mid aan waxba ka garanayn xilka loo dhiibtay iyo xiriiryadda caalamiga.
Waxuu dadyoowga shisheeya iyo somaalida kale ee aan isaga aqoontiis aqoon u sheega inuu Phd heesto oo uu isagoo sidan u qorta magaciisa Dr. Said Hussein Iid. Waa nin is badel badan, qolo waliba uu dan ka leeyahay, u sheega inuu iyaga u shaqeeyo, haduusa kuu baahneeyna telefoonka kaa qaban mayo, nin ka fuleeysana ma jiro.
Waxauu Madaxweeyne Farmaajo ku caaya inuu yahay nin fuley ah oo aan hogaan lahayn, ka baqa reerka Hawiye. Waxuu Kheyre ka sheegaa inuusan nidaamka Dowli shaqadeeda uusan aqoon, oo uusa waligii Dowlad usoo shaqeeyn. Waxuuu Fahad Yaasiin ka sheegaa inuu basaas dowlada Qadar yahay, oo aan aqoon Jaamacad heeysan, uuna danahiisa ku gaarayo.
Munaafaqnimadda Mudane Siciid Xuseen Ciid waxa si fiican u yaqaan Madaxweeynihii hore Xasan sheikh Mahamuud iyo Ra’iisul Wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid oo uu lacag ka dhacey, hadana waxuu ku faaana cashar baan u dhigay.
Saciid waxuu gacan yare u ahaan jirey godoomiye ku xigeenkii hore ee urur diimeedka Alitaxaad, wuuna kusoo dhaawacmay dagaaladaas. Saciid oo lagu dhaliilo inuu galey falal danbiyeedyo, musuqamaasuq iyo wax is daba marin waxaase ka mid ah.
✓ FAO oo ay wadashaqeyn kala dhaxeyso Wasaaradda ayaa waxauu ku amray in ay kaligiis la xiriiraan ayna qof kale wax la wadaagi karin. Ilaa heer ay gaarto in qof safraayo TICKETKIISA wasiirka loo soo diro.
✓ Waxa uu is daba marin ku sameeyay mashaariic fara badan sida mashruuc lagu magacaabo TCP kaas oo ah kor u qaadida tayada ama xirfada shaqaalaha Wasaaradda Beeraha,oo ay maalgalineysay Hey’ada FAO.
✓ Waxa uu sidoo kale is daba marin ku sameeyay lacag ay FAO ugu tala gashay qabsoomida Shirweynihii Qaran ee Sugnaanta Cuntada oo u qaabilsanaa nin la taliye ah oo isaga sameeystay oo ilaa hadda wax warqaddo laga heeyn. Uraraddii Caalamiga ahaa ee Somaaliya caawiyana ka careeysiisay.
✓ Waxa uu markasta shaqadiisa koowaad ka dhigtaa in uu badalo Agaasimaha Maaliyada ee Wasaaradihii uu soo maamulay sida dhacday mudadii uu maamulaayay,Wasaaradda Xanaanada xoolaha iyo Wasaaradda Beeraha uu hada Wasiirka ka yahay, si uu u keensado ruux u fududeeya dhaca iyo boobka hantida qaran.
✓ Bishii December, 2017 waxa uu Wasiirka Beeraha Antalya-Turkey u diray laba ruux aan shaqaale ka aheyn Wasaardda Beeraha si ay halkaa yurub uga galaan taas oo aan wafaqsaneyn nidaamka dowliga ah. Waxaa kale oo ka qayb galey shirkaas dad aan Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka u shaqeeynin.
✓ Wasiirka waxuu afduub iyo xushmad darro kula wareegay shaqadii Wasaaradda oo dhan, isago ku takrifalay awoodaha, maamulka iyo qaab agaasin ee dowliga ah. Wasiirka waxuu aflagaadooyin u geesta qof waliba xafiiskiisa shaqo dowli ah ula tago. Waxuu faragalin ku sameeyey hogamadda ka jira waaxyaha wasaaradda iyo gudiyadda.
✓ Wasiirka waxuu boob baahsan ku hayaa hantida Wasaaradda Beeraha, Asaga oo 17di bishi January 2018ki qaatay oo uu amray in gurigiisa loo geeyo gaari ay Wasaaradda Beeraha ugu deeqday heyadda FAO. Horeyna waxa uu sii qaatay dhowr gaari ay laheyd Wasaaradda Beeraha asaga oo siiyay Wasiir Ku xigeenka Aminga, iyada oo gawaaridaas ay u baahantahay Wasaaradda Beeraha. Waxa eey isku yihiin wasiirka ku xigeenka Wasaaradda Amniga, iyo xog badan ayaan dhowaan soo dhigi doona websitkeena.
✓ Shaqadiisa koowaad waxa uu ka dhigtay in uu kaligiis la wareego oo uu kusoo koobo cinwaanka Emailkiisa dhamaan shaqadda Wasaaradda, isagaoo xitaa diiday in CC ama Copy siiyo maamuladda sare Wasaaradda. Ujeedadda uu ka leeyahayna ay tahay in aan la la socon oo kaligiis iska wato. Arrintaas waxa ay dhalisay in uu u dirsaday shaqooyinka dibadda iyo gudaha dad aan shaqaale ka aheyn Wasaarada Beeraha. Taasoo sababtey in dhac iyo boob lagu sameeysto magaca Wasaaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Somaaliya .
✓ Shirarka iyo taba barada Wasaaradda Beeraha waxa uu u diraa dad aan shaqaalo ka aheyn Wasaaradda Beeraha, Asaga oo u wakiisho ugana faaideeya dad xigtadiisa ah waxa ayna xadgudub ku tahay Shaqaalaha Wasaaradda Beeraha. Waxaa shirarka dibadda iyo dalka ka dhax muuqda eheladiisa, walaalkiis iyo wiil abti u yahay oo la yiraahdo Cabdicasiis Siciid Muuse Baay sidda sawirka ka muuqata.
✓ Sido kale waxa uu si is xanbaar ah, dalka dibadiisa ku geeya shaqsiyaad soomaali ah lacagna uga qaataa asaga oo hore u sii qaaday shaqsiyaad somaali ah wadamada Turkey, Italy, iyo Germany oo cadeeynteeda la hayo.
✓ Shaqooyinkii Wasaaradda waxa uu wakiishay dad si gaar wax ula cunna oo aan shaqaale ka aheyn Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka.
✓ Wasiirka aqoontiisa ayaa aad loola yaaabey, xaga qoraalka iyo xaga fahanka. Waxaa mid lagu qoslo aheeyd marka bartiisa Facebook uu soo dhigay Shirweynaha Qaran ee Siyaasadda Sugnaanta Cuntada iyo Horumarinta Beeraha, sida ka muuqata Qoraalka uu so dhigay waxeey ku tuseeysa inuusan u diyaarsaneeyn hawlahiisa shaqo, uuna kala garaneeynin macnaha “Food security and Food Safety”. Food Security oo macnaheeda luqada soomaaliga lagu yiraahdo “Sugnaanta Cuntada”. Halka ay, Food Safety lagu macneeyo luqada somaaliga “Badbaadada Cuntada”.
✓ Sidoo kale Guddomiyaha Ururada Bulshada Raydka oo farriin u diray Madaxda Qaranka mar uu ka hadlaayay xafaladi xil-wareejinta maamulka Gobolka Banaadir ayuu ka codsaday in Wasaaradda Beeraha loo soo magacaabo Wasiir aqoon u leh maadama Wasaaradda Beeraha ay ku xirantahay nolosha dadka Soomaaliyeed. Wasiirka hada joogana uu ku ciyaaray dhismihii iyo geedi socodka maaamul wanaag ee dowliga ah. Sidoo kale wax aqoon uma laha Cilimiga Beeraha iyo inuu Wasaarad maamulo.
Daawo: Kooxda Daacish oo Internetka ku Baahisay Muuqaalka Sargaal ay ku dishay Dagmada Afgooye.(Toogasho Live ah)
Faah faahin: Dagaal u dhaxeeya Ciidamada Dowlada Iyo Al-shabaab Oo ka dhacay Moqokori
Dhismayal ka bilowday wadoyinka Kismaayo….
Sawirro: Guddoomiyaha Baarlamaanka & Xildhibaanada cusub ee Ahlusunna…
Xildhibaan Magan:- Khaska Kismaayo ka tagan waxaa ka danbeya Gen Gabra iyo Maxamed Abdi Afey.
admin 11th April 2015 27th August 2015